China Silicone Kitchen Items orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | SJJ
Ireo entana silikola dia malaza eran'izao tontolo izao. Miaraka amin'ny tombony azony amin'ny alàlan'ny fitaovam-pianarana silika sy ny fahaizany mitondra hafanana avy amin'ny -50 ka hatramin'ny +300 degre Fahrenheit, ny olona dia mamorona entana maro izay mety ampiasaina ao an-dakozia.
Ireo entana silikola dia malaza eran'izao tontolo izao. Miaraka amin'ny tombony azony amin'ny alàlan'ny fitaovam-pianarana silika sy ny fahaizany mitondra hafanana hatramin'ny -50 ka hatramin'ny +300 degre Fahrenheit, ny olona dia mamorona entana maro izay mety ampiasaina ao an-dakozia.
Izahay Pretty Shiny Gift dia be dia be ny entana efa misy toa ny lovia sy ny lovia silika, ny tsihy silipo, ny fitoeran-tavoahangy silipo, ny siny misokatra ary ny fonony, ny sotro vita amin'ny silika, ny lovia manidina, ny fantsom-baravarankely, ny borosy fanadiovana silipo sns. Afa-tsy ny fiasa, ny logo dia azo atao amin'ny entana ao an-dakozia silikola ho fampiroboroboana, dokam-barotra, orinasa ary fanomezana amin'ny alàlan'ny fanoratana, embossed na debossed miaraka na tsy misy loko. Ny ekipa teknikanay matihanina dia manandrana mamorona entana bebe kokoa hamaly ny fitakian'ny mpanjifa. Ny endriny namboarina dia raisina amin'ny fotoana mety. Matoky izahay fa ny kojakoja an-dakozia vita amin'ny silika dia hanampy amin'ny fanitarana ny orinasanao.
Fitaovana: Fitaovana silika
MOQ: Mifampiraharaha isaky ny tranga
Teo aloha: Kopa vita amin'ny silika
Manaraka: Silisy hafa
Pins manelatselatra LED
Amboara azo amehezana silika